Xildhibaan sheegay iney Kiinya ku qasbeyso Soomaaliya iney kala xaajooto badda ay ku haysato – Kalfadhi
Xildhibaan sheegay iney Kiinya ku qasbeyso Soomaaliya iney kala xaajooto badda ay ku haysato
Xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Cumar, oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (BFS), ayaa ku tilmaamay go’aanka ay Kiinya ku hakisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya kala dhaxeeyey istiraatiijiyo ka hortagis ah, oo ay ku dooneyso in ay Soomaaliya ugala xaajooto badda ay milkayaddeeda sheeganeyso ee ay Soomaaliya ku haysato.
Xildhibaan Cabdirisaaq, oo horay u soo ahaa Wasiirka Amniga Soomaaliya, waxa uu sheegya in ay sidoo kale suurtagal tahay in ay Kiinya dooneyso in ay saameyso natiijada la filayo in ay kasoo baxdo dacawada ay Soomaaliya u gudbisay Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ee la xiriiray sheegashadeeda qeyb ka mid ah Badda Soomaaliya.
“Waa istiraatiijiyo ka hortagis ah, si ay Dowladda Soomaaliya ugu qasabto wada-xaajood ku saaabsan muranka marin-biyoodka oo ay la yeelaneyso Kiinya ama ay u saameyso natiijada kiiska horyaala ICJ (Maxkamadda Cadaaladda Aduunka)” ayuu ku Xildhibaanku ku yiri dhigaal uu soo dhigay Tuwittarkiisa.
Tuwittarka uu Xildhibaan Cabdirisaaq kaga hadlay go’aanka Kiinya oo Ingiriis ku qoran
Xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Cumar waxa uu sheegay in go’aankaas ay Kiinya qaaday uusan waxba u dhimi karin bixinta iyo sharciyeynta Shidaalka Soomaaliya ee xirmooyinka uu ka kooban yahay dhawaan lagu soo bandhigay magaalada Landhan ee dalka Ingiriiska. “Tani waxba kama tareyso shirkii leesin bixinta ee Landhan” ayuu Xildhibaan Cabdirusaaq yiri.
10 maalin kadib ayey Kiinya go’aansatay in ay go’aan ka qaadato shir ka dhacay Ingiriiska 7-dii Febaraayo, oo shirkado baaray Shidaalka Soomaaliya la sheegay in ay kusoo bandhigeen Xirmooyinka Shidaalka Soomaaliya ee dhulka dalka ku jira, waxa ayna shalay u yeeratay Safiirkeedii u joogay Muqdisho, halka Safiirka Soomaaliya ee Neyroobina ay ku wargelisay inuu dhaqsi dalkeeda uga soo baxo, Xukumadda Soomaaliya-na ilaa iyo hadda go’aankaas kama hadlin.